Indlela yokwenza izitikha ze-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Indlela yokwenza izitikha ze-Instagram?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 362
Ngokuqinisekileyo ubonile kumabali abahlobo bakho kwi-Instagram, ezinye izitikha ezibambe ingqalelo yakho okanye ufumanisa ukuba zintle, kodwa awazi ukuba zenziwe njani okanye zenziwe njani ezi zincamathelisi ze-Instagram.
Izitikha zenza ukuba amabali esiwapapashayo abe nomtsalane, abe mnandi kwaye abe namandla, ke ngoko, yenza ukuba abantu abaninzi bafune ukubona amabali ethu.
Ukwenza ukuba ibe namandla ngakumbi, unokwenza oopopayi kumaphepha asimahla anjenge Giphy, eyenye yezona zaziwayo ukwenza oopopayi be-gif, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuba nomfanekiso kwifomathi ye-png (ngaphandle kwemvelaphi, ekuhleni) apho unokhetho oluninzi lokwenza ii-gifs.
Eyokuqala iquka beka imifanekiso emininzi ukwenza oopopayi, apho ungongeza khona ubumenyemenye, okanye amacebo okucoca ulwelo, iileta, nantoni na ofuna ukuyongeza Kwaye voila unesipho sakho esenzelwe wena
Olwesibini ukhetho luqulathe ividiyo onayo, okanye onokuthi wenze ividiyo, usike ividiyo ukuze ibe nayo ubude bemizuzwana emi-5 kwaye ukulungele. Unokukhetha iividiyo zeYouTube okanye ezo uzithandayo.
Emva kokuba ulungile, layisha kwi-giphy kwaye ucofe iqhosha elithi "Ngenisa kwiGiphy"Ungawugqiba ukuwuhlela ngendlela othanda ngayo ngaphambi kokuba uyithumele kwinethiwekhi yoluntu.
Ukuyifaka kwi-Instagram, kuya kufuneka uneakhawunti eqinisekisiweyo, kuba oku kuya kule khasi iakhawunti. Kuya kufuneka ubuncinci wenze i-gif ezi-5, Kuya kufuneka ugcwalise le fomu ukuze uqinisekise iakhawunti yakho imo kwaye ukulungele.
Kufuneka ulinde iakhawunti yakho ukuba iqinisekiswe ukuze ukwazi ukuyibeka kwi-Instagram.
Unokukhetha kwakhona ukusebenzisa usetyenziso ukwenza izitikha, ezinje Nasiphi isincamathelisi, apho unokwenza khona izitikha kuzo zombini i-WhatsApp kunye ne-Instagram, isebenza kuzo zombini i-Android kunye nee-IOs.
Kulula ukwenza izitikha apho kuya kufuneka ubeke isicatshulwa kunye nomfanekiso osele wabelane nawo kumabali akho.
Umenzi wesitika, Ngalesi sicelo unokwenza izitikha zeWhatsApp, kodwa ungakhathazeki, usenokwabelana ngesitikha kwi-Instagram embindini wemiyalezo ngobuqhetseba bokusika nokubeka apho, ukuze ukwazi ukusisebenzisa ukuthumela imiyalezo ngqo ukusuka kwi-Instagram.
Ngenxa yoko kuya kufuneka uye emabalini, ungathatha ifoto okanye ukhethe isicatshulwa, ukhetho ofuna ukulusebenzisa, ucofe apho ubuso buncumo, kulapho izitikha zikhona kwaye ukhethe leyo uyenzileyo.
Emva kokuba uzenzile izitikha, unokumisela ubungakanani ngokwandisa okanye ukunciphisa, ubungakanani obukhethileyo.
Kwaye kulula kwaye kulula ukuba ungazisebenzisa izincamathelisi, ukuhombisa amabali ngayo nantoni na oyifunayo, nokuba yiphando, imibuzo, phakathi kwezinye izinto ofuna ukuzisebenzisa izitikha kwi-Instagram
1 Benze baphile
3 Sebenzisa izitikha
Uziqhuba njani iizipho kwi-Instagram?